Baby Magic Hair & Body Wash (Soft Powder Scent) 488ml - အ၀ါရောင် | Buy online | SHOP.COM.MM
Baby Magic Hair & Body Wash (Soft Powder Scent) 488ml - အ၀ါရောင်
Baby Magic wash's great for newborns and you only need one product for hair & body. It'sagreat space saver. Read more Hide
အရမ်းကောင်းတဲ့ကလေး product လေး
အိမ်ကသားသားလေးကို baby magic နဲ့ပဲရေချိုးပေးတယ်။ ခေါင်းလည်းလျှော်လို့ရတယ်။ ကလေးအသားအရေဆိုတာ အရမ်းနူးညံ့တယ်လေ။ အဲ့ကြောင့် အရမ်းဂရုစိုက်၇တယ် ကလေးအတွက်ပစ္စည်းရွေးမယ်ဆိုရင်။ Baby Magic ကတော့အနံ့ရောအစွမ်းသတ္တိရောကောင်းတယ်။ Read more Hide
baby magic က Hair & body wash က သမီးလေးတွက် သိပ်ကိုအဆင်ပြေတယ်.. ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ ရေချိုးပေးပီးရင်တော့ အိပ်တော့တာပဲ.. Read more Hide
Specifications of Hair & Body Wash (Soft Powder Scent) 488ml - အ၀ါရောင်